custom RFID စွဲအင်တင်နာ, custom HF စွဲအင်တင်နာ, custom လှိုင်းနှုန်းသည် UHF စွဲအင်တင်နာ
1. custom RFID စွဲအင်တင်နာ
အဆိုပါဖောက်သည် HF ထောက်ပံ့ / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အင်တာနာဒီဇိုင်းရေးဆွဲ, ဖိုင်ကို format နဲ့ AUTO CAD (.dwg), ကျနော်တို့အတွက်ကိုးကား 24 နာရီ, အဆိုပါကိုးကားစရိတ်ပန်းကန်ချမှတ်ခြင်းစရိတ်နှင့်ထုတ်ကုန် quotation အပါဝင်သည်, နည်းပညာပိုင်းအရအသေးစိတ်အတည်ပြု, သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်, ကျနော်တို့အတွင်းအင်တင်နာ layout ကိုပေးသွားမှာပါ 24 နာရီ – ဖောက်သည်အတည်ပြုချက် – ဖောက်သည် Confirm ပန်းကန် layout ကိုနှင့်လစာပန်းကန်ကြေး – ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်နေ – ပန်းကန်ချမှတ်ခြင်းနှင့်နမူနာထုတ်လုပ်မှု – သည် 20 ~ ဖောက်သည်အတည်ပြုချက်ကိုအခမဲ့အင်တင်နာနမူနာ 400pcs.
ဖောက်သည်တစ်ဦးအင်တင်နာဒီဇိုင်းရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်, ထို့နောက်သငျသညျအင်တင်နာအရွယ်အစားသတ်မှတ်ချက်များပေးဖို့လိုအပျ, ခညျြနှောငျ chip ကိုမော်ဒယ်များ (ဥပမာ: Ultralight, ငါကုတ် SLI ကို-S က, ဂြိုလ်သား h3, Impinj Monza 5), သင့်ရဲ့ binding စက်မော်ဒယ်. ကျနော်တို့အတွင်းအထက်ပါသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိ 24 အင်တင်နာဒီဇိုင်းနှင့်စျေးနှုန်းပန်းကန်အခကြေးငွေအောင်နှင့်ထုတ်ကုန်ဈေးနှုန်းများကိုနာရီ. antenna ဒီဇိုင်း Drawing ဒီဇိုင်းအချိန်: HF အင်တင်နာ7စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အင်တင်နာ 24 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့.
2. HF / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ငွေမှင်အင်တင်နာအီလက်ထရောနစ် tag ကိုအင်းလေး, Silver, မှင် Print ကအင်တင်နာအင်းလေး
ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းဖော်ထုတ်ခြင်းအီလက်ထရောနစ် tags များပုံနှိပ်များအတွက်ငွေမှင်ကူးမှုမှင်ကောင်းသောလျှပ်စစ်စီးကူးခြင်းနှင့်ကော်ရှိပါတယ်, နှင့်ကောင်းမွန်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏အားသာချက်များရှိပါတယ်, တည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို, အနိမ့်ဓာတ်တိုးခုခံ.
ယင်းအီလက်ထရောနစ် tag ကိုအတွက်အင်တင်နာကိုလုပ်ဖို့အင်တင်နာအစားရိုးရာစွဲနည်းလမ်း print ထုတ်မှကူးမှုမှင်များအသုံးပြုမှုဟာ RFID အီလက်ထရောနစ် tag ကို၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်လျော့နည်းစေ.
Silver, မှင်အင်တင်နာအီလက်ထရောနစ် tags များအဓိကအားဖြင့် Anti-အတုများအတွက်အသုံးပြုကြသည်ပုံနှိပ်, လုံခွုံရေး, ထုတ်ကုန်များ၏ဆန့်ကျင်လက်ကမြင်း, ကကိုက်တစ်ချိန်က tags များပျက်စီး, Anti-အတုထုတ်ကုန်များသုံးစွဲခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အဆင်ပြေရာဖြစ်ပါသည်.
frequency: HF 13.56MHz / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF 840 ~ 960MHz
antenna အရွယ်အစား: ထုံးစံဓလေ့
tag ကိုအလွှာ: PET / စက္ကူ
antenna ပစ္စည်း: Silver, ငါးပိကူးမှုမှင်